အသင်းကြီးအားလုံးနီးပါး အနိုင်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းပြီး ၊ ယူနိုက်တက် သရေကျနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်လိုက်တဲ့ #လော်ရိုး - SPORTS MYANMAR
အသင်းကြီးအားလုံးနီးပါး အနိုင်ရမယ်လို့ ခန့်မှန်းပြီး ၊ ယူနိုက်တက် သရေကျနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်လိုက်တဲ့ #လော်ရိုး
ဒီတစ်ပတ် ပွဲစဉ်တွေ ယှဉ်ပြိုင် ကစားအပြီးမှာတော့ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ ကစားကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေ ကို အပြည့်အ၀ ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ ကလပ်အသင်းပွဲစဉ်တွေဟာ ကြားထဲမှာ ခေတ္တ နားထားမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အသင်းကြီး တိုင်းကတော့ ဒီကာလမှာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေဖို့ ရလာဒ်တွေ ရအောင် ကြိုးစားလာမှာ သေချာပါတယ်။
သတိထားမိစရာ တစ်ခုက အသင်းကြီးတွေ အားလုံးဟာ ကြားမှာ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ကစားထားခဲ့ရတာ ဖြစ်လို့ ပွဲပန်းမှုတွေ အနည်းငယ် ရှိနေနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်အတွက် လော်ရိုး ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ….
လက်စတာ ရဲ့ လက်ရှိ စွမ်းဆောင်ရည်က တော်တော်လေးကို ကောင်းသလို ၊ ဗာဒီ ကလဲ တိုက်စစ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတယ် ဆိုတာ လက်ရှိ အနေအထားရဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရော်ဂျာ ရဲ့ အန်ဖီးကို ပြန်လာတဲ့ ခရီးစဉ်က တစ်မျိုးတစ်ဖုံတော့ ထူးခြားမှုတွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်သလို ၊ ဒီပွဲအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ရော်ဂျာ ကိုယ်တိုင်လဲ ဇဲလ်ဘု ကို3ဂိုး အထိ ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ လီဗာပူး ခံစစ်ကို ကြည့်ရင်း တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွေးထားမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် သေချာပေါက် ပြောနိုင်တာ တစ်ခုက လက်စတာလဲ အန်ဖီးမှာ ရုန်းကန်ရဦးမယ် ဆိုတာပါ။ အထူူးသဖြင့် လက်စတာ ရဲ့ နောက်တန်း ကစားပုံဟာ လီဗာပူး တိုက်စစ်ကို တားဆီးပြဖို့တော့ လုံလောက်မှု မရှိသေးပါဘူး။
လီဗာပူး ခံစစ်မှာ ပြသနာ အနည်းငယ် ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ တိုက်စစ်ကတော့ အပြစ်ပြောစရာကို မရှိသေးတာပါ။ လက်စတာ ကလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ လက အိုးထရက်ဖို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးထက် တိုက်စစ်ကို ပိုပြီး အားပြုလာမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲစဉ်နဲ့ ဒီပွဲက ဆင်တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လီဗာပူး ရဲ့ အနေအထားက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နောက်ထပ် နိုင်ပွဲ တစ်ပွဲ ရယူသွားဖို့ ကြိုးစားဦးမယ် ဆိုတာ သေချာပေါက် ပြောရဲတယ်ဗျာ…..
ခန့်မှန်းချက် – လီဗာပူး 2-1 လက်စတာ
အာဆင်နယ် – ဘုန်းမောက်
အိုးထရက်ဖို့မှာ ကစားသွားတဲ့ အာဆင်နယ် ရဲ့ ကစားပုံက တော်တော်လေးကို စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် သရေ တစ်မှတ်ရတဲ့ အတွက်တော့ သူတို့က မျှတတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုလို့ တွေးချင် တွေးကြမှာပါ။
ဘုန်းမောက်ကလဲ ဒီရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ စတင်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ၊ သမိုင်းကြောင်း အစဉ်အလာတွေ အရတော့ အာဆင်နယ် ဆီကနေ အမှတ်ခွဲယူဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အီမရိတ်မှာ နောက်ဆုံး လာရောက် ကစားခဲ့တဲ့4ပွဲမှာ သူတို့ အသင်းဟာ ပွဲတိုင်း ရှုံးထားတာမို့ ၊ ဒီတစ်ပတ်မှာလဲ အဲဒီ အတိုင်းပဲ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ အနေနဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ချို့တော့ ရလာမှာပါ။ အာဆင်နယ် ကလဲ ဘောလုံးကို ကိုင်ပြီး ကစားမှာ ဖြစ်သလို ၊ တိုက်စစ်က အဆုံးသတ် ကောင်းတော့ ၊ အိမ်ရှင်တို့ နိုင်ပွဲ ပြန်လည် ရယူမယ် ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် – အာဆင်နယ် 2-0 ဘုန်းမောက်
မန်စီးတီး – ဝုဖ်
ဝုဖ်က ကြာသပတေးညမှာ တူရကီ အထိသွားပြီး ယူရိုပါလိဂ် ကစားရမှာမို့ ဒီပွဲဟာ သူတို့အတွက် ခရီးစဉ် အရရော ၊ ပွဲအနေအထား အရပါ ပွဲပန်းမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
မန်စီးတီး ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အဲဗာတန်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ကစားပြပြီး ၊ ချန်ပီယံဆု ကို ကာကွယ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ် ဆိုတာ ပြသသွားနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ တကယ်တော့ အဲဒီပွဲမှာ မန်စီးတီး အနေနဲ့ အဲဗာတန် ရဲ့ အိမ်ကွင်း အနေအထားကြောင့် ရလာဒ်ကောင်း ရယူပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ မှန်းမထားခဲ့ကြပါဘူး။
ဝုဖ်ကလဲ ခံစစ်ပိတ် ကစားတာထက် ၊ တိုက်စစ် ဖွင့် ကစားမှ ပိုကောင်းတတ်တဲ့ အသင်းဖြစ်လို့ ၊ ဒီပွဲမှာ မန်စီးတီးကို ယှဉ်ကစားဖို့ဆို ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာပါ။ အိမ်ရှင်တို့ အနိုင်သေချာတဲ့ ပွဲမျိုးပါပဲ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး 3-0 ဝုဖ်
ဆောက်သမ်တန် – ချဲဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘရိုတ်တန် ကို အနိုင်ရခဲ့သလို ၊ ချန်ပီယံလိဂ်မှာလဲ လိုင်လီ ကို အနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ချဲဆီး အတွက် အချိန်ကောင်း တစ်ခုကို ဖြတ်ကျော် နိုင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ချက် ပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ အခွင့်အရေးတွေကို လွယ်လွယ် နဲ့ ပြန်ပေး နေရဆဲဗျာ။ လမ်းပတ်ဟာ အသင်းကို အချိန်နဲ့အမျှ တိုးတက်မှုတွေ ရှိအောင် တည်ဆောက်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် တည်ငြိမ်မှု အားနည်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲအတွက် ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ရရင် ချဲဆီး ကပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ဆောက်သမ်တန်လဲ အခွင့်အရေးတွေ ရလာနိုင်တယ်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ပွဲဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ နဲ့ အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ အိမ်ရှင် နည်းပြ ဟာဆန်ဟုသ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို စတင် အခြေချ ကာစက တော်တော်လေး ထိရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိပေမယ့် ၊ တကယ်တမ်းမှာတော့ အဲဒီလောက်ကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဒီရာသီ ဆိုရင် အခုထိ အိမ်ကွင်း နိုင်ပွဲတောင် မရသေးဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ချဲဆီးပဲ အဆုံးသတ်မှာ အသာစီးရသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် – ဆောက်သမ်တန် 1-2 ချဲဆီး
နယူး – ယူနိုက်တက်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ နယူးကာဆယ် ပရိသတ် အချို့လိုပဲ ၊ ကျနော်လဲ သူတို့အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှု အပြည့်နဲ့ ကစားပြဖို့ အချိန်တန်ပြီ ထင်ပါတယ်။ စတိဗရု အနေနဲ့လဲ အသင်းကို ကျစ်လစ်တဲ့ ကစားဟန်မျိုး ရှိအောင် ပြသဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
ယူနိုက်တက် ကတော့ အာဆင်နယ် နဲ့ သရေကျတယ်ဆိုပေမယ့် ၊ တစ်ပွဲလုံမှာ အနိုင်3မှတ် ရယူနိုင်လောက်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေ နဲ့ ကစားပြသွားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆိုးရှားပြောတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ယူဖို့ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ ယူရမယ် ဆိုတာ ကျနော်ကတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒီလို ကိစ္စတွေက ရေရှည် လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲတုန်းကလို အနိုင်ယူမယ့် ခြေစွမ်းမျိုးတွေတော့ ထိန်းထားသင့်တာပဲလေ။
ခန့်မှန်းချက် – နယူးကာဆယ် 1-1 ယူနိုက်တက်
ဘရိုတ်တန် 0-2 စပါး
ဘန်လေ 2-1 အဲဗာတန်
နော့ဝှစ်ချ် 1-1 ဗီလာ
ဝက်ဖို့ဒ် 2-1 ရှက်ဖီး
ဝက်စ်ဟမ်း 2-0 ပဲလေ့
အသင္းႀကီးအားလုံးနီးပါး အနိုင္ရမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းၿပီး ၊ ယူနိုက္တက္ သေရက်နိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္လိုက္တဲ့ #ေလာ္ရိုး
ဒီတစ္ပတ္ ပြဲစဥ္ေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားအၿပီးမွာေတာ့ နိုင္ငံတကာ ပြဲစဥ္ေတြ ကစားၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ကို အျပည့္အ၀ ဆြဲေဆာင္ထားတဲ့ ကလပ္အသင္းပြဲစဥ္ေတြဟာ ၾကားထဲမွာ ေခတၱ နားထားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၊ အသင္းႀကီး တိုင္းကေတာ့ ဒီကာလမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစဖို႔ ရလာဒ္ေတြ ရေအာင္ ႀကိဳးစားလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
သတိထားမိစရာ တစ္ခုက အသင္းႀကီးေတြ အားလုံးဟာ ၾကားမွာ ယူရိုပါလိဂ္ နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြ ကစားထားခဲ့ရတာ ျဖစ္လို႔ ပြဲပန္းမွုေတြ အနည္းငယ္ ရွိေနနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတစ္ပတ္အတြက္ ေလာ္ရိုး ရဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ….
လက္စတာ ရဲ့ လက္ရွိ စြမ္းေဆာင္ရည္က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေကာင္းသလို ၊ ဗာဒီ ကလဲ တိုက္စစ္မွာ ေျခစြမ္းျပေနတယ္ ဆိုတာ လက္ရွိ အေနအထားရဲ့ အမွန္တရား တစ္ခုပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေရာ္ဂ်ာ ရဲ့ အန္ဖီးကို ျပန္လာတဲ့ ခရီးစဥ္က တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံေတာ့ ထူးျခားမွုေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္သလို ၊ ဒီပြဲအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္လာဦးမွာပါ။
ေရာ္ဂ်ာ ကိုယ္တိုင္လဲ ဇဲလ္ဘု ကို3ဂိုး အထိ ျပန္ေပးလိုက္ရတဲ့ လီဗာပူး ခံစစ္ကို ၾကည့္ရင္း တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ျပနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေတြးထားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာနိုင္တာ တစ္ခုက လက္စတာလဲ အန္ဖီးမွာ ႐ုန္းကန္ရဦးမယ္ ဆိုတာပါ။ အထူူးသျဖင့္ လက္စတာ ရဲ့ ေနာက္တန္း ကစားပုံဟာ လီဗာပူး တိုက္စစ္ကို တားဆီးျပဖို႔ေတာ့ လုံေလာက္မွု မရွိေသးပါဘူး။
လီဗာပူး ခံစစ္မွာ ျပသနာ အနည္းငယ္ ရွိေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ၊ တိုက္စစ္ကေတာ့ အျပစ္ေျပာစရာကို မရွိေသးတာပါ။ လက္စတာ ကလဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ လက အိုးထရက္ဖို႔မွာ ကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးထက္ တိုက္စစ္ကို ပိုၿပီး အားျပဳလာမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယူနိုက္တက္ နဲ႔ ပြဲစဥ္နဲ႔ ဒီပြဲက ဆင္တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လီဗာပူး ရဲ့ အေနအထားက ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေနာက္ထပ္ နိုင္ပြဲ တစ္ပြဲ ရယူသြားဖို႔ ႀကိဳးစားဦးမယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာရဲတယ္ဗ်ာ…..
ခန႔္မွန္းခ်က္ – လီဗာပူး 2-1 လက္စတာ
အာဆင္နယ္ – ဘုန္းေမာက္
အိုးထရက္ဖို႔မွာ ကစားသြားတဲ့ အာဆင္နယ္ ရဲ့ ကစားပုံက ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ဒါေပမယ့္ သေရ တစ္မွတ္ရတဲ့ အတြက္ေတာ့ သူတို႔က မၽွတတဲ့ ရလာဒ္တစ္ခုလို႔ ေတြးခ်င္ ေတြးၾကမွာပါ။
ဘုန္းေမာက္ကလဲ ဒီရာသီမွာ အေကာင္းဆုံးပုံစံနဲ႔ စတင္ထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ၊ သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာေတြ အရေတာ့ အာဆင္နယ္ ဆီကေန အမွတ္ခြဲယူဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ အီမရိတ္မွာ ေနာက္ဆုံး လာေရာက္ ကစားခဲ့တဲ့4ပြဲမွာ သူတို႔ အသင္းဟာ ပြဲတိုင္း ရွုံးထားတာမို႔ ၊ ဒီတစ္ပတ္မွာလဲ အဲဒီ အတိုင္းပဲ ထင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အေနနဲ႔ အခြင့္အေရး တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ ရလာမွာပါ။ အာဆင္နယ္ ကလဲ ေဘာလုံးကို ကိုင္ၿပီး ကစားမွာ ျဖစ္သလို ၊ တိုက္စစ္က အဆုံးသတ္ ေကာင္းေတာ့ ၊ အိမ္ရွင္တို႔ နိုင္ပြဲ ျပန္လည္ ရယူမယ္ ထင္ပါတယ္။
ခန႔္မွန္းခ်က္ – အာဆင္နယ္ 2-0 ဘုန္းေမာက္
မန္စီးတီး – ဝုဖ္
ဝုဖ္က ၾကာသပေတးညမွာ တူရကီ အထိသြားၿပီး ယူရိုပါလိဂ္ ကစားရမွာမို႔ ဒီပြဲဟာ သူတို႔အတြက္ ခရီးစဥ္ အရေရာ ၊ ပြဲအေနအထား အရပါ ပြဲပန္းမွုေတြ ရွိလာနိုင္ပါတယ္။
မန္စီးတီး ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က အဲဗာတန္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား အနိုင္ကစားျပၿပီး ၊ ခ်န္ပီယံဆု ကို ကာကြယ္ဖို႔ အသင့္ရွိေနတယ္ ဆိုတာ ျပသသြားနိုင္ခဲ့တယ္ေလ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီပြဲမွာ မန္စီးတီး အေနနဲ႔ အဲဗာတန္ ရဲ့ အိမ္ကြင္း အေနအထားေၾကာင့္ ရလာဒ္ေကာင္း ရယူျပနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူကမွ မွန္းမထားခဲ့ၾကပါဘူး။
ဝုဖ္ကလဲ ခံစစ္ပိတ္ ကစားတာထက္ ၊ တိုက္စစ္ ဖြင့္ ကစားမွ ပိုေကာင္းတတ္တဲ့ အသင္းျဖစ္လို႔ ၊ ဒီပြဲမွာ မန္စီးတီးကို ယွဥ္ကစားဖို႔ဆို ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိုင္တာပါ။ အိမ္ရွင္တို႔ အနိုင္ေသခ်ာတဲ့ ပြဲမ်ိဳးပါပဲ။
ခန႔္မွန္းခ်က္ – မန္စီးတီး 3-0 ဝုဖ္
ေဆာက္သမ္တန္ – ခ်ဲဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ဘရိုတ္တန္ ကို အနိုင္ရခဲ့သလို ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာလဲ လိုင္လီ ကို အနိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ခ်ဲဆီး အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္း တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ ေပးရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ အခြင့္အေရးေတြကို လြယ္လြယ္ နဲ႔ ျပန္ေပး ေနရဆဲဗ်ာ။ လမ္းပတ္ဟာ အသင္းကို အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ တိုးတက္မွုေတြ ရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တည္ၿငိမ္မွု အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပြဲအတြက္ ခန႔္မွန္းခ်က္ ထုတ္ရရင္ ခ်ဲဆီး ကပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ ေဆာက္သမ္တန္လဲ အခြင့္အေရးေတြ ရလာနိုင္တယ္ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ ပြဲဟာ စိတ္လွုပ္ရွားစရာေတြ နဲ႔ အဆုံးသတ္သြားမွာပါ။ အိမ္ရွင္ နည္းၿပ ဟာဆန္ဟုသ္ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ကို စတင္ အေျခခ် ကာစက ေတာ္ေတာ္ေလး ထိေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့မိေပမယ့္ ၊ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ အဲဒီေလာက္ႀကီး မဟုတ္ေသးပါဘူး။
ဒီရာသီ ဆိုရင္ အခုထိ အိမ္ကြင္း နိုင္ပြဲေတာင္ မရေသးဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ဲဆီးပဲ အဆုံးသတ္မွာ အသာစီးရသြားမယ္ ထင္ပါတယ္။
ခန႔္မွန္းခ်က္ – ေဆာက္သမ္တန္ 1-2 ခ်ဲဆီး
နယူး – ယူနိုက္တက္
ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ နယူးကာဆယ္ ပရိသတ္ အခ်ိဳ႕လိုပဲ ၊ က်ေနာ္လဲ သူတို႔အသင္းဟာ အိမ္ကြင္းမွာ ေပါက္ကြဲမွု အျပည့္နဲ႔ ကစားျပဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ စတိဗ႐ု အေနနဲ႔လဲ အသင္းကို က်စ္လစ္တဲ့ ကစားဟန္မ်ိဳး ရွိေအာင္ ျပသဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။
ယူနိုက္တက္ ကေတာ့ အာဆင္နယ္ နဲ႔ သေရက်တယ္ဆိုေပမယ့္ ၊ တစ္ပြဲလုံမွာ အနိုင္3မွတ္ ရယူနိုင္ေလာက္တဲ့ ေျခစြမ္းေတြ နဲ႔ ကစားျပသြားခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆိုးရွားေျပာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ယူဖို႔ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုေတာ့ ယူရမယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္ကေတာ့ ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥေတြက ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ အာဆင္နယ္ နဲ႔ ပြဲတုန္းကလို အနိုင္ယူမယ့္ ေျခစြမ္းမ်ိဳးေတြေတာ့ ထိန္းထားသင့္တာပဲေလ။
ခန႔္မွန္းခ်က္ – နယူးကာဆယ္ 1-1 ယူနိုက္တက္
ဘရိုတ္တန္ 0-2 စပါး
ဘန္ေလ 2-1 အဲဗာတန္
ေနာ့ဝွစ္ခ်္ 1-1 ဗီလာ
ဝက္ဖို႔ဒ္ 2-1 ရွက္ဖီး
ဝက္စ္ဟမ္း 2-0 ပဲေလ့